Ngolunye usuku engxenyeni yokuqala ka-2020, ngokungazelelwe sathola i-imeyili evela kukhasimende lisicela ukuthi siphinde sicaphune i-pallet engezansi futhi sitshele ikhasimende ukuthi mangaki amaphalethi angalayishwa esitsheni esingu-20-ft. Ngenxa yesipiliyoni sethu sangaphambilini, sisheshe sabala izintambo ...
NgoMeyi 2017, uMkhandlu WesiFundazwe i-Hebei Wokukhuthaza Ukuhweba Kwamazwe Omhlaba wahlela umbukiso wezinto zokwakha, okwenzeka ukuthi ube sedolobheni lapho ikhasimende likhona. Sibhalisile futhi singathatha leli thuba ukuvakashela ikhasimende. Sifikile ...
Engxenyeni yesibili yonyaka ka-2015, ikhasimende lenkampani yethu eligxile ekukhiqizeni amapayipi okuhambisa ukhonkolo lisithumelele imidwebo ethile. Umkhiqizo emdwebeni wawungukukhuphuka. Lokhu kukhwezwa kungenziwa ngensimbi yensimbi noma insimbi yensimbi. Kodwa-ke, ukukhishwa kwensimbi kulula uku ...